Mujaahidiinta Ansaaru Diin Oo Weeraro Ka Fuliyay Dalka Maali. – Bogga Calamada.com
Mujaahidiinta Ansaaru Diin Oo Weeraro Ka Fuliyay Dalka Maali.
Ciidamada Dowladda Saliibiyada Faransiiska ee ku sugan Waqooyiga dalka Maali ayaa maalmihii lasoo dhaafay la kulmay weerarro isugu duqeymo iyo qaraxyo oo ay ku qaadayeen xoogagga Mujaahidiinta Xarakada Ansaaru Diin ee ka tirsan Jamaacaatka Jihaadiga ee dhulkaasi ka dagaallama.
Bayaan ay barta Interetka ku faafisay Xarakada Ansaaru Diin ayaa waxay ku sheegatay mas’uuliyadda weerarradaasi, iyadoona xustay in howl-galladaas kala duwan ay khasaare xooggan ku gaarsiisay Ciidamada Saliibiyiinta ee Faransiiska.
Habeenimadii Arbacada ee todobaadkii lasoo dhaafay oo taariikhdu ku beegeyd 25ka Muxaram 1438 hijriyada ayaa Mujaahidiintu waxay Miino waddada dhinaceeda lagu aasay ku qarxiyeen gaari gaashmaan oo ay lahaayeen Ciidamada Faransiiska oo marayay tuulada Abeera ee Waqooyiga dalka Maali.
Sida ay Mujaahidiintu sheegeen, lama oga khasaaraha rasmiga ah ee Ciidamada Gaalada kasoo gaaray weerarkaas qaraxa ah, balse subixii xigay ayaa la arkay gaadiid kolonyo ah oo ay leeyihiin Ciidamada Meliteriga Faransiiska oo jiidaya gaarigii qaraxa lagula eegtay tuulada Abeera, iyadoo loo maleynayo inuu jiro khasaare nafeed oo qaraxaasi uu sababay.
Sidoo kale, habeennimadii ay taariikhdu ku beegneyd 29ka Muxaram ayaa Bayaanka waxaa lagu sheegay in Mujaahidiinta Xarakada Ansaaru Diin ay weerar duqeyn ah ku qaadeen Saldhigga lagu magacaabo Kaandi ee Ciidamada Faransiisku ay ku leeyihiin magaalada Kiidaal ee dalka Maali.
Duqeynta ayaa loo adeegsaday hoobiyeyaal iyo garneello, iyadoo madaafiicduna ay gudaha u galeen Saldhigga, waxaana Macluumaadka ay helayaan Mujaahidiintu ay sheegayaan in duqeyntaasi ay dhalisay khasaare nafeed, sidoo kalena ay waxyeello soo gaartay laba diyaaradeed oo Helicopter ah oo Xeradaas dhex yaallay.
Dhinaca kalena Xarakada Ansaaru Diin ayaa gaashaanka ku dhifatay warar ay maalmihii lasoo dhaafayÂ faafinayeen qaar ka tirsan Warbaahinta Caalamiga ah, kuwaas oo sheegayay in Mujaahidiintu ay aqbaleen xabad joojin dhex marta iyaga iyo Xukuumadda daba dhilifka ee Bomako.
Ansaaru Diin waxay wacad ku martay inay sii wadi doonto dagaalka Jihaadka ee ka dhanka ah Saliibiyiinta soo duulayaasha iyo Xulafadooda Murtaddiinta ah, illaa dhulka Maali looga maamulayo Shareecada islaamka, waxayna dhinaca kale Mujaahidiintu ay ugu baaqeen dhallinyarada Muslimiinta ee ku nool dalka Maali inay kusoo biiraan kolonyada Jihaadka, si ay usoo cehstaan xuquuqda la boobay, ayna u hoos harsadaan harka Shareecada.